I-Woodstone Crib B&B - I-Airbnb
I-Woodstone Crib B&B
Igumbi e-ifulethi eliyihhotela ibungazwe ngu-Jason
Sikhokhisa ngekhanda ngalinye.Ufuna indawo yokuhlala ekhaya ngesabelomali?Ungabe usabheka okunye. Nizokwamukelwa njengabangane, nihlale njengomndeni futhi niphinde niphile izinkumbulo phakade.* Abantu okungenani aba-5 ongababhukha. Uma kuncane sicela ubuze kuqala.Ikhishi elivamile le-canteen nekhishi eliphansi. Iphuli ifakiwe
Ngemuva kwalolu bhubhane, sethula kuwe ihholo lokuhlala elinezindlu zokulala ezintathu ezihlanzekile, elisesigodini sesimanje sase-Arpora. Ukugxuma, ukweqa, nokugxumela kude namabhishi adume kakhulu e-Goa, okungukuthi, A,B,C - Anjuna, Baga kanye ne-Calangute yase-Goa, kodwa nokho kubekwe endaweni ezolile, ezungezwe imvelo.
Isiqandisi umnyango okabili
Amakamelo okulala anomoya
Uku-ayina ngesicelo mahhala
Ikhishi elisezingeni eliphansi hhayi efulethini
Siseduze kakhulu neSaturday Night Bazaar, kanye namakilabhu adume kakhulu eGoa; Tito's, LPK.
Ngokushesha kakhulu uzokwazisa indawo emaphakathi ozoba nayo ngokuhlala kwakho
1 umbhede omkhulu, 1 usofa, omatilasi abangu- 3
Kwabiwe ngaphandle i-infinity i-lap pool
4.82 · 388 okushiwo abanye
Idolobhana elinokuthula, lesimanje eligcwele umango nezihlahla zikakhukhunathi. I-Serene nokho ixhumeke kahle emabhishi adumile nezindawo ezishisayo. Amakilabhu, izimakethe, amathrekhi omjaho, ukudla okuhlukahlukene; uyiqambe igama, i-Arpora inayo.
Ngibheke ngabomvu ukukubamba! Ngitholakala ngocingo njalo uma ngingekho mathupha ukuze ngikusize uhlele uhambo lwakho, futhi ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo. Ngizokutshela ngohambo olungcono kakhulu lweziqhingi, imidlalo yasemanzini, nanoma yini enye oyithandayo. Cabanga ngedeski lethu lokuhamba njengesitolo esisodwa sanoma yini ese-Goa. Buza nje!
Ngibheke ngabomvu ukukubamba! Ngitholakala ngocingo njalo uma ngingekho mathupha ukuze ngikusize uhlele uhambo lwakho, futhi ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo. Ngizo…
Inombolo yepholisi: HOTN002967